Mugabe faces backlash for painting rosy picture at independence celebrations - News JS
Mugabe faces backlash for painting rosy picture at independence celebrations - News24
An 18-year-old Zimbabwean has appeared in court for allegedly raping a 13-year-old church mate who had turned down his love proposal. Zimbabwe marks 37 years of independence amid economic crisis · 'We've had no power cuts for 15 months' ...
Zimbabwe opposition sign coalition agreement - The Zimbabwe Mail
HARARE — The Movement for Democratic Change (MDC) led by Morgan Tsvangirai and former Vice President Joice Mujuru's National People's Party have formed what they term a pre-election alliance ahead of Zimbabwe's watershed 2018 general polls.
[ 19th April 2017 ] Tsvangirai's remarks on Memorandum of Understanding with the National People's Party Relationships - The Zimbabwe Mail
It is the first day of the 38th year of our independence but with the majority of Zimbabweans with nothing to show for it except dire poverty, extreme suffering, hunger and disease. Yesterday, we had a leader who skirted the critical issues affecting ...
Zimbabwean opposition leaders ally to challenge Mugabe - Channel NewsAsia
Two of Zimbabwean President Robert Mugabe's chief rivals said on Wednesday they were allying to deny the 93-year-old another term in office. Posted 20 Apr 2017 00:50. FILE PHOTO: Zimbabwean President Robert Mugabe addresses a rally in Harare, ...
Zimbabwe: Opposition Snub Freedom Celebrations - AllAfrica.com
Harare — ZIMBABWEAN opposition parties have boycotted the country's independence celebrations in protest of the deteriorating human rights situation and the collapse of the economy. On Tuesday, the country marked 37 years since independence from ...
A letter from Zimbabwe at 37 and a day - The Daily Vox (blog)
Marching bands, long speeches and colourful acrobatic displays marked Zimbabwe's 37th independence celebrations held around the country on Tuesday. People filled up White City Stadium in the second-biggest city of Bulawayo, just as they do every year, ...
Pictures: State brutality at Uhuru celebrations - The Zimbabwe Daily
President Robert Mugabe had just made his address to mark the 37th anniversary of Zimbabwe's Independence Day where – as usual- he harped on about how under his leadership, the country had accorded the due freedoms to the people of Zimbabwe.